Dowladda Soomaaliya oo dagaalka Gedo ku eedeysay Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay in duullaan gardarro ah oo laga soo abaabulay gudaha dalkeeda lagu soo qaaday Gobolka Gedo.
BALAD-XAAWO ,Soomaaliya - Dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa Maamulka Jubbaland ayaa xalay ilaa iyo saakay ka socda degmada Balad-Xaawo ee Gobolka Gedo
Dagaalkaan oo sida lasoo warinayo uu qasaaro xooggan ka dhashay ayay Dowladda Soomaaliya ku eedeysay Kenya in ay ka danbeysay waxna ka ogeyd qorshihiisa.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dubbe, ayaa ciidamada uu hoggaamiyo wasiirka Amniga Juballand ku tilmaamay Jabhad fallaago ah oo ay hubeysay Kenya, wuxuu yiri, “Jabhaddii fallaagada ahayd ee ay soo hubaysay Dowladda Kenya oo caawa u soo tallowday xuduudda Soomaaliya ayaa soo weerartay Gobolka Gedo, gaar ahaan Degmada Beled Xaawo.
Cismaan Dubbe, waxa uu sheegay in dagaalkaan uu qilaafsan yahay maslaxadda nabad ku wada noolaanshaha Labada Shacab ee Kenya iyo Soomaaliya isla markaana uu ka baxsan yahay xeerarka caalamiga ah.
“Waxan si adag u cambaaraynaynaa duulaankaas gardarada ah ee laga soo abaabulay gudaha Kenya kaas oo qilaafsan maslaxadda nabad ku wada noolaanshaha shucuubta Gobolka iyo xeerarka caalamiga ah ee ku dhisan is xaq dhawrka iyo ilaalinta madaxbaanaanida qaranimo”, ayuu yiri, Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya.
Gobolka Gedo ayaa ka mid noqday goobaha ugu xasaradda badan dalka tan iyo markii Farmaajo loo doortay Madaxweynaha Soomaaliya.
Farmaajo oo kasoo jeeda gobolka Gado ayay u jeedadiisa ugu weyn tahay inuu helo dhowr iyo toban kursi Baarlamaan oo taalla gobolkaas, wuxuuna baal-maray heshiiskii hab maamulka doorashada laga gaaray ee bishii September 2021 ka dhacay Muqdisho, kaas oo ay qodabadiisu ka mid ahaayeen in ciidamada dowladdu ku daabushay Gedo la soo cello laguna wareejo amniga deganadaas kuwa Juballand.